Ọ bụ 2018 afọ nke iwebata ụwa ego SDR jikọtara na ego crypto? : Martin Vrijland
Ọ bụ 2018 afọ nke iwebata ụwa ego SDR jikọtara na ego crypto?
gbara akwụkwọ BITCOIN, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 December 2017	• 11 Comments
N'izu gara aga n'izu a, m bipụtara n'ihu magazin magazin bụ Economist si na 1988 na Facebook. Ọ na-egosi phenix nke na-ere onwe ya na ego akwụkwọ ọkụ. Gburugburu olu nke fenix bụ mkpụrụ ego ọlaedo a na-ahụ anya bụ nke na-echetara bitcoin crypto currency. Na mkpụrụ ego a anyị na-ahụ afọ 2018 gosiri. Economist bụ magazin a na-akwanyere ùgwù nke ndị Britain na-emesapụ aka bụ nke a na-ebipụta kwa izu. Echiche nke akwụkwọ ahụ na-elekwasị anya maka otu akụkụ dị mkpa na mmepe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ọhịa akụ na ụba ụwa. A na-ahụ magazin a dị ka magazin ndị ọkachamara, maka ndị ọkachamara.
Na m ihe aga aga M kọwara otú kaadị ego bitcoin, ethereum na ndị ọzọ, ma eleghị anya na ụwa Ọkọlọtọ nke IMF ga-jikọrọ site yinye ngọngọ usoro ẹkenam ke 2017, ulo oru si China. O yiri ka nke a bụ ọhụrụ ụwa ọkọlọtọ kwesịrị na Special ịbịaru Rights (SDR) ego nke IMF itie ime na-dollar (na ndị ọzọ ego dị ka euro, British paụnd, wdg). Ụdị ego ego ahụ yiri ka ọ bụ ụkpụrụ ọhụrụ maka ego dijitalụ na ego ego ga-apụ n'anya nke nta nke nta.
Ego ndị dị ugbu a ejikọtalarị na SDR site na IMF. Ụdị ego a na-atụ anya ka ọ ga-enwe ike ịgbanahụ ego ego zuru ụwa ọnụ, ma ọ dịghị ihe ọ dị. N'isiokwu bu nke a, akowara m otu esi ejikọta njikọ nke SDR na ACChain. Vidio dị n'okpuru ebe a bipụtara ACCHAin na ụnyaahụ ma naghị ekpughe. N'ebe a, ị ga-ahụ ihe phenix pụtara. Ọ bụrụ na anyị etinye nke a na-esote n'ihu akwụkwọ nke Economist si na 1988, mgbe ahụ, 2018 nwere ike ịghọ 'afọ nke anyị ga-enweta ntọala nke usoro ego ụwa. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Ụfọdụ ndị na-eme nnyocha na-atụ anya na a ga-enwe nsogbu iji chụpụ ndị mmadụ gaa na ego mkpuchi. A na-eji nwayọọ nwayọọ agbajie ụgwọ ọrụ nke dollar (petro) n'ihi na Saudi Arabia emechilarị mmekọrịta mmanụ na China, na yuan chinois nwere ike zụrụ na yuan ga-agbanwe agbanwe mgbe niile ka ọ bụrụ ọlaedo maka ndị Saudis. Nsogbu nke na-amalite na United States adịghị ka ọ ga-edozi, ugbu a na ndị ahịa China na America ji ikwesị ntụkwasị obi na-akwado dollar ahụ na Saudi Arabia. O kwere omume na ụgwọ dị elu nke elu igwe nke a na-ejighị n'aka na United States na mfu dollar nwere ike iduga nsogbu ụwa. Nke a bụ ihe atụ ndị nnyocha Lynette Zang (Chief Market Analyst na ITM Trading) na Fahad Qawasami tinye na vidiyo n'okpuru. Ha na-ekwupụtakwa na ACChain ga-etinye njikọ n'etiti ego mkpuchi na SDR. Ọ nwere ike ịbụ nsogbu nsogbu?
Ndụmọdụ nke ndị ọrụ nyocha a bụ itinye ego gị na ọlaedo, n'ihi na ọlaedo bụ ihe onwunwe nke ga-anọgide na-edebe ebe nchekwa na IMF agaghị enwe ike ijide. N'ihi ya, ọ ga-abụ ihe ha bu n'uche mgbe nile. Ma, ajụjụ a bụ ma nke a ọ bụ eziokwu. E kwuwerị, gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na a na - ejikọta asambodo ọlaedo na ACChain site n'ịgbanye ha ka ha bụrụ ihe nkwụnye ego? I chere na ọ bụ na ọ dịghị onye na-agbapụ ya n'aka; ọ bụghị ọbụna "ọlaọcha" dị oké ọnụ ahịa. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo).
Enweghị m ike ịkọ ma ọ ga-enwe nsogbu ego. Otú ọ dị, echere m na 2018 ga-abụ afọ nke IMF ga - eji ego mkpuchi (site na ACCAIN njikọ). N'ezie, usoro ahụ amalitelarị na 2017 na iwebata ACChain. Ya mere, anyị na-aga nchịkọta nke ụwa dum na nke ahụ abụghị atụmnihu. Enwere ike imebi ego maka ihe eji agbacha oji. A ga-akọtakwu ya ọzọ dị ka ihe na-adịghị mma n'ihi ihe ize ndụ nke ịnara mmadụ ihe ma na-etipịa ya. Anyị nwere ike ọbụna na-atụ anya na a ga-eji ego ịkwụ ụgwọ ụgwọ dị elu, nke mere na azụmahịa dijitalụ ga-adị ọnụ ala. Ego mkpuchi ahụ ga-ewe ebe akwụkwọ ego ochie anaghị adị m mkpa. E kwuwerị, ihe anyị na-ahụ bụ na dollar abụọ na euro (na ego ndị ọzọ niile dị n'ụwa) abụghị ọnụ ọgụgụ karịa akaụntụ. Nanị ihe dị iche bụ na ị ka nwere ike iwepụta ihe ederede site na igwe ego. Nke ahụ ga-abụkwa ihe na-adịghị amasị (site n'ịkwalite ụgwọ). N'eziokwu, ma ego ndị dị ugbu a na cryptocurrency bụ ugbu a jikọtara na SDR, nke pụtara na IMF bụ kpamkpam na azụ.
Mgbanwe a na-akwụ ụgwọ ego nwere ike ịbụ nsonaazụ nke usoro akụ akụ dị ugbu a. Ọ bụ mgbe ahụ ka a ga-atụ anya maka 2018? Ọ na-adị ka kọfị. Cryptos nwere ike ịbụ naanị ebe nchekwa dị mma. Gold na ọlaọcha na-apụta ugbu a, ma ọ bụrụ na a na-ebute ha n'okpuru ngọngọ akụ nke ACChain, ha na-ejidekwa IMF. Ọzọkwa, ịnweghị ike iwepu na ụlọ akụ ahụ na-ekwu na ha kwesịrị itinye akwụkwọ mgbapụta na akaebe ọla edo na ọlaedo nkịtị (nke onye ahịa na-ejide akwụkwọ ahụ) naanị etinyela ego ọzọ (were ngwaahịa).
Banyere onye na phenix na n'ihu peeji nke The Economist nke 1988 na vidiyo nke ACChain bụ n'ezie, m ga-enwe ya na isiokwu na-esonụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: goldsilver.com
Otu esi ejikọta bitcoin na ndị ọzọ na Rights Rights Special (IMD) site na ACChain
Ihe Bitcoin na 'Big Data' bụ ọlaedo ọhụrụ ma ọ bụ mmanụ ọhụrụ ahụ?
Amụma dị egwu: ụgha ọkọlọtọ ebili maka mkpocha ego
Kedu ihe Bitcoin nwere jikọrọ 'singularity' na nhazi ya na AI?
Ihe kpatara mba mba ụwa ji arụ ụka maka nnukwu ike oriri nke Bitcoin
Tags: A-SDR, ab, AChain, bitcoin, ethereum, agba, IMF, onye nchekwa akụ
Notis dere, sị:
12 December 2017 na 14: 38
2018 oge bitcoin?
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ndị ọgaranya ga-agbapụ na ndị ọzọ na-enyo enyo dịka ala ahụ (ma ọ bụrụ na ha emebeghị ya n'afọ ndị gara aga?) Silver dị mma mgbe niile n'ihi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị mkpa, wdg.
Ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu mgbe ahụ, ọ bụ nnukwu ihe na-eme ka ndị na-agbanwe bitcoins gbanwee nke ndị ọgaranya nwererịrị n'akpa ha ka ha bụrụ ego ọ bụla.
N'ọnọdụ abụọ ahụ, nwoke na nwanyị nkịtị (na ọ dịghị transgender dị ka) ga-enwe ike ịlaghachi na ọbụna ga-ada na-achọ. Nkwekọrịta atọ na ọnụọgụ dị iche iche ga-ekwe omume. Mee ka ihe ngbochi ebe obibi site na nkuzi, nkuzi asụsụ, ịkwa ụlọ, nwa nwanyị na akwa ụlọ.
12 December 2017 na 16: 53
Silver na ọlaedo bụ ihe bara uru ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ha n'ọdụ ụgbọ mmiri gị. Mana na nsogbu, o kwesịghị iju gị anya na a machibidoro ịzụta ma ọ bụ ree ya na ọla dị oké ọnụ ahịa.
Na mgbakwunye, nke a bụ naanị mmasị maka ndị nwere ụfọdụ mgbakwunye. Onwa Jan na Pet enweghi penny iji chekwaa ma gha aghasi ike ịkwụ ugwo.
12 December 2017 na 17: 23
Ihe na-emeri m bụ otú e si eji UN eme ka ọ bụrụ ihe a na-anabata, yana ihe gbasara AI. UN, IMF, BIS, NATO wdg niile bụ ihe nrụbichara niile nke NWO. Ha gbalịrị iduzi ìgwè ewu na atụrụ otu ụzọ ...
12 December 2017 na 17: 34
UN chọrọ ichota Bitcoin na Ethereum - Na n'oge na-adịghị anya
Òtù Mba Ụwa (UN) nọ na njedebe ikpeazụ nke ihe nwere ike ịbụ otu n'ime arụmụka ngọngọ oge niile ma ọ bụ oge niile.
Mgbe ihe ịga nke ọma na iji ethereum ngọngọ yinye na-ekesa Pakistani rupees ndị 100 Tupu mgbe afọ a, na UN World Food Programme (WFP) na ndokwa nche ọzọ iji hụ na ya n'enweghị kpere ọzọ ogbo nke ya ọrụ.
A pilot ule ndokwa amalite na Jọdan 1st May, ga-ahụ WFP ezipụ unspecified nọmba nke dinars karịa 10,000 nnata na mkpa nke ego nkwado na mmezi nri, na ihe mgbaru ọsọ nke ịgbasa ọnụ ọgụgụ nke ndị nnata 500,000 ndị mmadụ site na 2018.
12 December 2017 na 21: 18
"Mgbe ahụ, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka nke ọma na anyị nwere ike inye ọgwụgwụ-na-ọgwụgwụ nsuso nke ego na-abịa ma na-apụ, ebe ọ nọrọ, ihe ọ nọrọ na na a mannerville Nke na-adịghị ekwe na nzuzo nke ndị na-erite uru. "
n'ụzọ na-adịghị ebido na nzuzo ... yeah right
12 December 2017 na 22: 14
Ọ bụ onye nchịkọta akụkọ nke Futurism ugbu a bụ onye ọ ma ọ bụ onye ọ bụ?
13 December 2017 na 20: 37
HAHAHA ee idd, site na hermaphrodite na android .. ma na-eche ihe nwughari ngwugwu o were. ???
14 December 2017 na 00: 03
Echere m ihe gbasara nhọrọ nhọrọ
14 December 2017 na 07: 04
Ah, nhọrọ Mengele, ị ga-ajụ Plasterk ..
13 December 2017 na 20: 45
N'ihi na ndị nchịkọta weebụ na ndị ọzọ Stasi ọrụ na-ekere òkè na Aivd si Christmas mgbaghoju anya .. onye maara na ị na-enwe nkwalite ????
16 December 2017 na 00: 06
" Otu esi ejikọta bitcoin na ndị ọzọ na Rights Rights Special (IMD) site na ACChain
Dị ka ụda na-agbanye mmanụ na ọkụ na North Korea, Jerusalem na Venezuela, ike na-agbanwe n'akụkụ ọwụwa anyanwụ »
Nleta nile: 14.617.069
Martin Vrijland op Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX